होटलको कोठामा झु ण्डि एको अवस्थामा २२ बर्षिया स्वास्थ्यकर्मी कार्कीकाे शव! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > होटलको कोठामा झु ण्डि एको अवस्थामा २२ बर्षिया स्वास्थ्यकर्मी कार्कीकाे शव!
admin May 29, 2020 जीवनशैली, समाचार, समाज 0
केही दिन देखि सामाजिक सञ्जालमा न्यायको अपिल गर्दै एक स्वास्थ्यकर्मीको तस्विर सार्वजनिक भएको छ । उनको रहस्यमय निधन भएको र त्यसको छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै आवाज उठाइएको छ । मोरङको उर्लाबारी घर भएकी अनमी तनुजा कार्की तेह्रथुमको मेन्छेयम गाउँपालिका स्वास्थ्यचौकीमा अनमीको रुपमा कार्यरत थिइन् ।
उनी तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका( १ बसपार्कस्थित सन्तोषी होटलमा अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् । होटलको कोठामा झु ण्डि एको अवस्थामा मृत फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । २२ वर्षीया अनमी तनुजा कार्की अविवाहित भएको र उनी प्रेममा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट खुलेको छ ।
बागमती प्रदेशकि उपसभामुख तामाङ कोरोना संक्रमित
कुलेश्वरमैै यसरी लुटिइन् गायिका मिलन अमात्य